ဝိမုတ္တိသုခ (The Bliss Of Emancipation): Happiness is Here
Happiness is Here ~ Thich Nhat Hanh
Little by little you must train yourself for life, for happiness. You probably receivedacollege degree that you spent years working for, and you thought that happiness would be possible after you got it. But that was not true, because after getting the degree and findingajob, you continued to suffer. You have to realize that happiness is not something you find at the end of the road. You have to understand that it is here, now.
တဖြေးဖြေးချင်း သင့်ဘဝအတွက်၊ သင့်ရဲ့ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုအတွက် သင်ကိုယ်တိုင်ပဲ လေ့ကျင့်ပြုပြင်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်အနေနဲ့ ဘွဲ့ ဒီဂရီတစ်ခုခုကို နှစ်ပေါင်းများစွာအချိန်ပေးယူခဲ့ပြီး၊ ဒီဘွဲ့ ရပြီးခဲ့ ရင်တော့ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့လိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့ကောင်း ထင်ခဲ့နိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ထင်ထားသလို မဟုတ်ပါဘူး။ ဘွဲ့ ရပြီးတဲ့နောက် အလုပ်ရဖို့ရှာရပြန်တော့ စိတ်မအေးချမ်းမှုက ဆက်ပြီးရှိနေပြန်ပါတယ်။
တကယ်တော့ သိထားရမှာက စိတ်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုဆိုတာဟာ လမ်းဆုံးပန်းတိုင်ကိုရောက်တော့မှ ရရှိခံစားရမယ့် အရာတစ်ခု မဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲ။
ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုဆိုတာဟာ အခု ရောက်နေတဲ့ နေရာ၊ ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲ ရှိနေတယ်ဆိုတာကို သင် နားလည်သဘောပေါက်ထားရမှာ ဖြစ်တယ်။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 10:23 PM